Kingsburgh, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Ikhaphukhaphu kwaye inomoya oziqulatheleyo iindwendwe suite ilungele ukubaleka elwandle.
Ukuhamba ngemizuzu embalwa ukusuka elunxwemeni, kwidolophu entle yaseManzimtoti. Imizuzu engama-25 ngaphandle kweTheku. Igaraji yokupaka iyafumaneka, enezinyuko ezikhokelela ekungeneni. Ikhitshi enezixhobo, iWiFi engafakwanga, ukufikelela echibini. Singabamba ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu, ilungele abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2.
Izinto eziyimfuneko (izibane, ifeni kunye ne-wifi) zinamandla ogcino kwaye ziya kuqhubeka zisebenza ngokususa umthwalo.
Indawo yeendwendwe iqhagamshelwe kwindlu enkulu kodwa inomnyango wayo owahlukileyo kwaye iyazilawula. Indawo yokungena inyuke ngezinyuko.
Indawo ivulekile ecwangcisiweyo kunye nekhitshi / indawo yokutyela, igumbi lokulala, ibhedi yokulala yendwendwe eyongezelelweyo okanye ezimbini kunye nedesika yazo naziphi na iimfuno zomsebenzi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji yebar, i-microwave, umatshini wekofu, iketile kunye ne-oveni encinci kunye nesitovu seepleyiti ezimbini, kunye nezinye izinto ezibalulekileyo zokupheka. I-Cutlery kunye nezitya ziyafumaneka kubantu aba-4.
Iyunithi inokulala ababini kwibhedi yobukhulu bokumkanikazi kunye nabantwana ababini kwi-double bed size sleeper couch. Kungenjalo, oomatrasi bokuvuthela bangenziwa bafumaneke kwiindwendwe ezimbini ezongezelelweyo.
Igumbi lokuhlambela linazo zombini ishawa kunye nebhafu.
I-Weber braai iyafumaneka ukuze iindwendwe ziyisebenzise.
Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise iqula lethu lokuqubha xa singalisebenzisi.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2
I-Amanzimtoti yindawo enenduli kakhulu ngoko ke imoto inyanzelekile ukuba uhambe!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kingsburgh